Vaovao - Amin'ny fomba ahoana no ahafahana mampiasa milina fanapahana laser laser ankehitriny?
Ny fanapahana laser dia ny fanoloana ny antsy mekanika nentim-paharazana amin'ny andry tsy hita. Izy io dia manana ny mampiavaka ny avo lenta, haingam-pandeha haingam-pandeha, tsy voafetra amin'ny lamina fanapahana, fananganana karazana automatique, fitaovana fitsitsiana, fanapahana malefaka ary vidin'ny fikarakarana ambany. Hatsaraina tsikelikely na hosoloina. Fitaovana fanodinana vy nentim-paharazana.
Inona no tanjon'ny milina fanapahana laser? Ny tanjon'ny masinina fanapahana laser dia tsy inona fa ny: fanapahana, fihoarana, fanapahana sary, amin'ny teny tsotra, fanapahana.
Tombon'ny Masinina fanapahana laser fibre Guohong:
1. Fiakarana avo lenta sy tery tery;
2. Haingam-pandeha haingana, tampon'ny fanapahana;
3. Fiantraikany kely amin'ny hafanana, tsy misy fivoaran'ny mekanika ny ampahany kely;
4. Ny fikirakirana dia tsy voafetra amin'ny sary;
5. Izy io dia manana fampiharana marobe ary afaka mitantana akora isan-karazany sns.
Inona avy ireo fitaovana azo tapahina:
Fanodinana vy vy, vy karbonika, varahina, vy firaka, vy silikao, vy lohataona, aliminioma, firaka aliminioma, ravina vita amin'ny fantsom-boaloboka, ravina metaly metaly nandrisika, ravina pickling, volamena, volafotsy, Qin ary firakotra vy hafa ary fittings fantsona.
Fampiharana lohan'ny milina fanapahana laser: fanodinana metaly takelaka, famokarana marika famantarana, boaty elektrika ary famokarana kabinetra elektrika, indostrian'ny injeniera, fitaovana elektrika, kojakoja mekanika isan-karazany, kojakojan-dakozia, kojakojan-tokatrano, fiara, masinina fambolena, fitaovana fitsaboana, sambo, aerospace , Jiro, indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana, harato tariby, indostrian'ny birao, kojakoja fanatanjahan-tena, fanodinana vy ary orinasa hafa. Ny sakany apetraka dia malalaka dia lehibe, ary io no safidin'ny indostrian'ny famokarana sy fanodinana.